မုန်တိုင်း WASHI(27W) – လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း ဖြစ်သွားပြီ « MMWeather Information BLOG
« လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း WASHI(27W) ဆက်လက် တည်ရှိနေဆဲ တောင်တရုတ်ပင်လယ်မှ အပူပိုင်းမုန်တိုင်း WASHI မလေးရှားနှင့် စင်္ကာပူနိုင်ငံတို့သို့ ဦးတည် »
မုန်တိုင်း WASHI(27W) – လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း ဖြစ်သွားပြီ
By mmweather.ygn, on December 19th, 2011
27W WASHI – 19 Dec 2011 0600Z
Location: 9.7 111.9
လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းအဆင့်သို့ရောက်ရှိသွားသည့် WASHI မြန်မာစံတော်ချိန် ၁၂၃၀ နာရီ ရရှိသည့် data များအရ မြောက်ဘက်သို့ အနည်းငယ် လမ်းကြောင်းပြောင်းသွားပုံ(အပေါ်)
လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းအဆင့်သို့ရောက်ရှိသွားပြီဖြစ်သည့် မုန်တိုင်း WASHI ၏ အရှိန်ကြောင့် ဗီယက်နန်ကမ်းခြေ၊ ထိုင်းပင်လယ်ကွေ့နှင့် မြန်မာ့ပင်လယ်ပြင်တို့တွင် အရှေ့ဘက်မှ လေပြင်းတိုက်ခတ်နိုင်မှု အခြေအနေပြပုံ(အောက်ပုံ)
မုန်တိုင်း WASHI ၏ အရှိန်ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်မည့် ဒေသတွင်း ရေကြီးမှု ဖြစ်နိုင်ခြေပြပုံ ဖြစ်ပါသည်။(အောက်ပုံ) ပုံတွင် ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်း၊ မလေးရှား၊ အင်ဒိုနီးရှားနှင့် ဘရူနိုင်းနိုင်ငံ ဒေသအချို့တွင် ရေကြီးမှု ဖြစ်နိုင်ခြေ အဝါရောင်(LOW) မှ အနီရောင်(HIGH) အထိ ရှိနေပြီး ….
မြန်မာနိုင်ငံအတွက် မိုးရွာသွန်းမှု များပြီး ရေကြီးနိုင်မည့် အန္တရာယ်မရှိကြောင်း တွေ့ရပါသည်။
မုန်တိုင်းသတင်း, ရေကြီးခြင်း ဖြစ်နိုင်ခြေ 27W, SENDONG, TWENTYSEVEN, WASHI, စင်္ကာပူ, ပစိဖိတ်အနောက်မြောက်, မလေးရှား, တောင်တရုတ်ပင်လယ်, လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း « လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း WASHI(27W) ဆက်လက် တည်ရှိနေဆဲ တောင်တရုတ်ပင်လယ်မှ အပူပိုင်းမုန်တိုင်း WASHI မလေးရှားနှင့် စင်္ကာပူနိုင်ငံတို့သို့ ဦးတည် »
« လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း WASHI(27W) ဆက်လက် တည်ရှိနေဆဲ တောင်တရုတ်ပင်လယ်မှ အပူပိုင်းမုန်တိုင်း WASHI မလေးရှားနှင့် စင်္ကာပူနိုင်ငံတို့သို့ ဦးတည် »	Copyright © 2017 MMWeather Information BLOG Log in - All Rights ReservedPowered by WordPress & the Atahualpa Theme by BytesForAll. Discuss on our WP Forum